Fahamaroan’ny mpivarotra amoron-dalana : tsy any amin’ny olana fototra no zahan’ny kaominina (NewsMada) | AEMW
Fahamaroan’ny mpivarotra amoron-dalana : tsy any amin’ny olana fototra no zahan’ny kaominina (NewsMada)
Tranga andiany vaovao hafa indray, ny faran’ny herinandro lasa teo, ny fanesorana ireo mpivarotra eny amoron-dalana eo Analakely. Tsy zava-baovao ny ady amin’ireo mpivarotra ireo raha eto Antananarivo Renivohitra. Fa nahoana no tsy mety afaka sy miverimberina ? Fanadihadiana.
Tsy any amin’ny olana fototra no zahan’ny kaominina hatrany amin’ny fanjakana foibe mihitsy, momba ireo fahamaroan’ny mameno ny arabe ireo. Tsy zava-baovao ny fanalana azy ireo amin-kery fa efa nisy hatramin’izay, saingy nahoana no tsy mety afaka ? Taorian’ny krizy 2002, nihamaro ireo mpivarotra tsy ara-dalàna, vao mainka nisavovona taorian’ny krizy 2009, rehefa nikatona ny ankamaroan’ireo orinasa afakaba eto Antananarivo sy ny manodidina. Mbola tsy tafarina ny vokatry ny krizy 2002, nanamafy izany indray ny krizy hafa 2009 ary izao mbola hita mibaribary izao, taona 2016, ny fiantraikany. Iray amin’izany ny fahamaroan’ny mpivarotra amoron-dalana.
Ankoatra ireo very asa tany amin’ny faritra afakaba sy tany amin’ny sehatra tsy miankina hafa, izay lasa mameno ny sisin-dalana sy efa anaty lalana, efa nisy ny talohan’izy ireo, 10 taona mahery, nanao izany asa fitadiavam-bola izany. Mbola hafa ireo mpivarotra toaka amin’ny sisin-dalana amin’ny alina. Tsy nahomby hatramin’izay ka hatramin’izao ny fandravan’ny mpiasan’ny kaominina azy ireo. Mazavazava kely ny lalana na ny sisin-dalana iray na roa andro, tafaverina indray izy ireo rahampitso.
336.000 very asa noho ny krizy politika
Tsena 16 no misy eto Antananarivo Renivohitra. Efa « tsentsina » ireo toerana ireo, koa raha miampy ireo 336.000 very asa ireo, araka ny tarehimarika navoakan’ny Birao iraisam-pirenena momba ny asa (BIT), miampy ireo mpitsoa-ponenana avy any ambanivohitra, aiza ny toerana hahazaka izany ? Koa na hanamboatra tsena misy rihana 10 isan-taona aza ny kaominina Antananarivo Renivohitra, mbola tsy hahafoana azy ireo izany raha tsy voavaha ny olana fototra, dia ny tsy fananana asa ! Tsy anjaran’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny hanome asa azy rehetra ireo fa mila fifampidinihana izany amin’ny andrim-panjakana hafa.
Tsy amin’ny lafiny asa ihany fa amin’ny lafiny maro hafa, fitohanan’ny fifamoivoizana, fahadiovan’ny tanàna, tsy ahitana fivoarana raha ity Renivohitr’i Madagasikara ity.
← An-kitsim-po : fitakiana nampahantra vahoaka (NewsMada)
Tsy mazoto hafindra toerana ireo mpivarotra (NewsMada) →